Kusvira Nyoro PaFio Mumota pamberi peBakers Inn – Makuhwa.co.zw
Kusvira Nyoro PaFio Mumota pamberi peBakers Inn
Nyoro PaFio Mumota pamberi peBakers Inn – Kaive kaportable kaMudamboro. Yeah ndakazoziva zvaireva masasi eharare paakati kune vakadzi vanonzi mudamboro pasviro. Ndakasangana nekababy kepaFacebook MuFio and ndakaziva kuti pakati tisangane paBakers Inn apa kunofiwa… ndinodyiwa ndikazvirega. Asi lucky for me neniwo ndakazodyawo.
Akasvika kuma around 8PM akati ndine nzara and i had no option than to buy her chicken inn next to where i was parked. PaChat yedu i had to her kuti apfeke kashort skirt asina panty mukati and achingosvika handina kuita care that it was our first time meeting ndakangomuti how far? Akaseka achibvisa zambia yaanga akamonera achindiratidza kaMini Skirt kaive Dangerous kari keRed kakati Mbambamba. Saka paakataura zvenzara ndakamhanya kunotenga.
Akadya tichitaura hedu and ini ruoko rwangu rwaive muskirt make richitambisa matinji ake. Akatanga achinyara achitaura zvemukomana wake nemukadzi wangu (yes i am married) but ndakamusimbisa kuti don’t worry. Akapedza kudya or rather akamira kudya coz as she said hanzi ndamupa nyere and ndakutofanirwa kumusvira ndisati ndaenda.
Related Topics:Kusvira Nyoro PaFio Mumota pamberi peBakers Inn
Ndakasvirwa naTaxi Driver ndashaya mari yekumubhadhara!
Kusvira ka19 Year OLD tasangana paGroup Chat